खुला दिशामुक्त देशको राजधानीमा जम्मा ६० वटा शौचालय, यात्रा गर्दा खाना-पानी बन्द गर्नुपर्ने हो ? – Nepal Japan
खुला दिशामुक्त देशको राजधानीमा जम्मा ६० वटा शौचालय, यात्रा गर्दा खाना-पानी बन्द गर्नुपर्ने हो ?
नेपाल जापान १७ माघ १९:२४
सिंगो मुलुक खुला दिशामुक्त घोषणा भए पनि देशको राजधानी काठमाडौंको अवस्था भने यस सवालमा अत्यन्त नाजुक छ । २० लाखभन्दा बढी मानिसको बसोबास रहेको काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र सार्वजनिक सौचालयको संख्या जम्मा ६० वटाजति मात्र छ ।
यस्तो स्थितिमा काठमाडौंमा यात्रा गर्दा खाना-पानी नखाइ गर्नुपर्ने हो भन्दै सांसदहरुले प्रश्न उठाएका छन् । शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा काठमाडौं मुलुकलाई खुला दिसामुक्त घोषणा गरिएको भए पनि शौचालयलगायत पर्याप्त पूर्वाधार निर्माण नगरिएको भन्दै सांसदहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
शून्य समयमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद आशाकुमारी विकले ठूलो लगानीमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण गरिएको भए पनि कतिपय प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको भन्दै यसतर्फ गम्भीर बन्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो ।
“नेपाल खुला दिसामुक्त घोषणा भइसके पनि कामपाभित्र जम्मा ६० वटामात्र सार्वजनिक शौचालय छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “तीमध्ये मुस्किलले २० वटा मात्र प्रयोग भएका छन् ।” राजधानीमै पर्याप्त सङ्ख्यामा सार्वजनिक शौचालय नहुनु अत्यन्त पीडादायक अवस्था भएको उल्लेख गर्दै उहाँले महानगरको यात्रा गर्दा पानी नपिई हिँड्नुपर्ने बाध्यता रहेको सुनाउनुभयो । उहाँले मादपण्डअनुसारको शौचालयको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
नेकपाकी इन्दुकुमारी शर्माले चुरे दोहन रोक्न सरकार असफल भएको आरोप लगाउनुभयो । चुरे दोहन रोक्न नसक्दा माफिया मौलाएको उल्लेख गर्दै उहाँले चुरेको अवैध उत्खनन् रोक्न सरकारसँग माग गर्नुभयो ।
नेकपाकै कुमारी तुलसी थापा तुसारोले हिउँदे बालीमा ठूलो नोक्सानी पुर्‍याएको भन्दै किसानलाई तुरुन्त राहतको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । उहाँले बाढीपहिरो तथा प्राकृतिक प्रकोपबाट प्रभावित भएका जनतालाई अहिलेसम्म पनि राहतको व्यवस्था गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गर्नुभयो । नेकपाका खगराज अधिकारीले पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थलका लागि १०४ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्ने खबर सही हो कि के हो ? भन्दै जिज्ञासा राख्नुभयो ।
नेकपाकै गजेन्द्रबहादुर महतले छाउगोठका नाममा गरिब जनताको घर भत्काइएको भन्दै त्यसो नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । “छाउगोठका नाममा घर भत्काइयो । होटलमा बसेका यात्रीको मृत्यु भएको छ, अब के होटल भत्काउने रु?, बस दुर्घटनामा परी मृत्यु भएको छ, बाटो भत्काउने रु अहिले छाउगोठका नाममा हाम्रो घर भत्काउने काम भइरहेको छ, सरकार के हेरेर बसेको छ ?”